Malta: Ebe Oké Osimiri Mediterenian Na-ejupụta na Eziokwu na Ahụmahụ Naanị
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Malta: Ebe Oké Osimiri Mediterenian Na-ejupụta na Eziokwu na Ahụmahụ Naanị
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Malta L ka R Palazzo Parisio n'abalị Valletta Grand Harbor
A nabatala Malta, agwaetiti nke di n'etiti Oke Osimiri Mediterenian maka ulo ya di oke onu ahia, ihu igwe di oku, na akuko puku mmadu asaa. Ọbịbịa na Malta bụ ịmịnye onwe gị na ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite mgbe ị na-anụ ụtọ ndụ kachasị mma nke ndụ ọhụụ na ahụmịhe echekwa iji gboo ọchịchọ nke onye njem ọ bụla.
Ulo na ulo nke Onwe
A kwadoro Malta maka ụlọ ya ndị mara mma, gụnyere ụlọ oriri na ọ luxuryụ hotelsụ ndị mara mma, ụlọ nkwari akụ akụkọ ihe mere eme, Palazzos, ụlọ ndị nkịtị, na ụlọ ugbo akụkọ ihe mere eme. Nọgide na palazzo nke narị afọ nke 16 ma ọ bụ 17th eweghachiri, nwee ọ inụ na ebe obibi okomoko nke e wuru n'ime mgbidi nke obodo oge ochie, na-enwe echiche gafee Grand Harbor, ma ọ bụ na-achọ njirimara nke ọtụtụ ụlọ ahịa mara mma mara mma nke jupụtara na Valletta, bụ isi obodo UNESCO World Heritage. , yana Malta dum na nwanne ya nwanyị Gozo.
Curated n'onwe Ahụmahụ
Ire nke Akụkọ
Heritage Malta ewebatala mgbatị gastronomic na saịtị ya mere eme. Ire nke akụkọ ihe mere eme bụ ohere maka ndị ọbịa iji tinye nri ọdịnala ọdịnala Maltese site na usoro nri sitere n’akụkọ ihe mere eme. Ndị otu ọkachamara ọkachamara Malta na-agwakọ menus ahụ nke ọma, na-ezukọta maka ahụmịhe iri nri onwe onye ebe ndị na-eme nri na-emegharị nri ndị na-atọ ụtọ na ebe ndị Inquisitors, Corsairs, Knights, na Libertines riri.
Afọ: Michelin Star talọ oriri na ọtaụ .ụ ka Private siri nri Services
The Malta Michelin Guide na-egosipụta ọmarịcha ụlọ oriri na ọ breadụ ,ụ, obosara nke ụdị nri, na nkà na-esi nri na Malta, Gozo, na Comino. Ndị mmeri nke kpakpando mbụ e nyere na Malta bụ:
• Noni - Siri nri Jonathan Brincat
• N'okpuru ọka - siri nri Victor Borg
Na mgbakwunye na ụlọ oriri na ọredụ Micheụ nke Michelin, Malta na-enyekwa ndị njem ọtụtụ ahụmịhe nri, site na nri ọdịnala nke nri nri mmiri dị iche iche nke Mediterenian nke mmekọrịta dị n'etiti Maltese na ọtụtụ obodo mepere emepe nke bi n'àgwàetiti ahụ, na ubi vaịn na-adịghị agwụ agwụ na-ebuga mmanya kasị mma. Otu nwekwara ike ịnụ ụtọ nri gọọmet nke ndị isi obodo na-esiri n'ụlọ gị mara mma ma ọ bụ ụlọ akụkọ ihe mere eme na Gozo. A na-agbanwe menu mgbe ụfọdụ dịka oge, nnweta, ma ọ bụ mkpali nke siri nri.
Ahụmahụ Wine Exclusivity
Ubi vaịn nke Malta na-akpọ ndị ọbịa ha ọmarịcha ohere ịnabata nanị ha n'ọnụ ụlọ ha na-atọ ụtọ. Ndị ọbịa nwere ike ịbanye n'otu n'ime mbara ala ha ma nwee ọ glassụ otu iko mmanya na-ele anya n'ubi vaịn na ebe dị egwu nke obodo Malta, yana ụsọ Oké Osimiri Mediterenian ma ọ bụ obodo ochie nke Mdina na-enwu. Ugbu a na-emeri otuto na asọmpi mba ụwa, ubi vaịn Maltese bụ ndị a ma ama karịsịa maka mmanya ha dị elu. Ndị maara ihe ga-enwe ekele maka mkpụrụ vaịn Maltese ndị amaala - girgentina na gellewza.
Onwe mgbe awa nke njem nke akụkọ ihe mere eme saịtị
Enwere ike ịgba akwụkwọ ọtụtụ saịtị akụkọ ihe mere eme maka njegharị nzuzo nke awa. Njegharị Co-Katidral St. John bụ otu ihe atụ. Emechara na 1577, Girolamo Cassar mepụtara St-John's Co-Katidral, onye Malta na-eto eto nke a na-eto eto na-arụkwa ọrụ maka iwu Grand Master's Palace na Valletta.
Hypogeum Hal Salflieni
Hypogeum na Malta, ebe ihe nketa ụwa UNESCO, bụ otu n'ime ebe olili ozu kacha ochie nke agwaetiti ahụ kemgbe 4000 BC. Ejiri ụlọ ndị na-ejikọ nkume, ime ụlọ ime, na “Ebe Nsọ Kachasị Ebe Nsọ Nile”, na-anọchite anya otu ụkpụrụ ụlọ nke ụlọ arụsị megalithic.
Pleslọ arụsị tigantija
Echere na otu n'ime ihe ncheta kacha ochie na-akwụghị ụgwọ n'ụwa, Ġgantija prelọ Nsọ dị tupu Stonehenge na Pyramids. Justlọ Megalithic dị n’elu mmiri, n’akụkụ ndịda ụsọ oké osimiri Malta, pleslọ Megalithic na-anọchite anya mmepe ọdịnala, nka, na teknụzụ dị egwu nke ndụ na 3600 BC.
Uellọ ihe nkiri Manuel (Teatru Manoel)
Manlọ ihe nkiri Manuel, nke Grandmaster Antonio Manoel de Vilhena wuru na 1732, bụ nke a na-ahụta dịka okpu mara mma na isi obodo Malta mara mma nke Valletta. Dị ka otu n'ime ụlọ ihe nkiri kachasị ochie n'ụwa, Manuel nwere aha'slọ ihe nkiri mba nke Malta n'ihi na ọ na-egosipụta ịma mma na akụkọ ihe mere eme nke ezigbo nkà na ọrụ omenaala Malta.
Ndi nwere otutu ulo bi na Maltese emepeela onu ha ka ha nwee ike inweta ndi nleta n’azu. Enwere ohere maka ndị ọbịa ka ha nweta ohere nke ịba ọgaranya na akụkọ ihe mere eme iji mụta akụkọ banyere ezigbo ndị ezinụlọ mara mma na Malta.
Njegharị ndị a na-eduzi na narị afọ nke 16 nke Palazzo gosipụtara ụlọ ezinụlọ nke ezinụlọ Maltese a ma ama, na-ejikọta atụmatụ ụlọ ndị mara mma na mmalite akụkọ ihe mere eme bara ụba ma na-etinye ihe dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme na nkọwa nke arịa ụlọ, eserese, na objets d'art n'ime ihe niile.
N'ebe dị nso na Nnukwu Obí Obí na n'okporo ámá Valletta, Casa Rocca Piccola na-enye njem nlezianya na-eduzi nke ọma site na Marquis na Marchioness de Piro n'oge ị nwere ike ịhọrọ ịnweta Prosecco ma ọ bụ Champagne yana obere nri Maltese ole na ole.
Palazzo Parisio Obí Ubi
Isi ihe nketa nke Malta, Palazzo Parisio, Naxxar dị n'etiti ndị kasị mma, ubi ndị nwere ụlọ na-emeghe ọha na eze ka ọ na-egosi ngwakọta nke Italiantali nke Italiantali yana nke dị na Mediterranean na isi.
Ka ha na-agafe ụlọ dị iche iche, na-ege ntị na ntuziaka ọdịyo a na-akọ, a na-anabata ndị ọbịa ịnụ ụtọ ọmarịcha ụlọ nke Palazzo Falson nke oge ochie nwere ụfọdụ ụlọ malitere na narị afọ nke 13.
ezigbo Gozo, Otu n'ime Àgwàetiti Nwanyị Nwanyị Malta
Ndị njem na-enwe ike ịnụ ụtọ agwaetiti Gozo mgbe ha na-anọ n'otu ụlọ ugbo ugbo ala mara mma. Uru nke ịnọ n'àgwàetiti a bụ na ọ dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere nwanne ya nwanyị nke Malta, nwere osimiri mara mma, ebe akụkọ ihe mere eme, ọtụtụ ụlọ oriri na ọ localụ localụ dị n'ógbè ahụ, ọ dịghịkwa ihe karịrị mkpụmkpụ ụgbọala. Ọ bụghị ụlọ ọrụ ugbo gị na mbụ, enwere ọtụtụ nhọrọ yana ihe eji enyere ndụ aka n'oge a, imirikiti nwere ọdọ mmiri nkeonwe na echiche dị egwu. Ha bụ ezigbo ezumike maka di na nwunye ma ọ bụ ezinụlọ na-achọ nzuzo. Maka ama ndị ọzọ, gaa na Ebe a.
Privategbọ njem na nkeonwe Maltese Yacht Charters
Osimiri ndị zoro ezo, mmiri ọkụ na agwaetiti ndị dị na Malta bụ njikọta zuru oke maka ụbọchị nkeonwe na ọkwa mara mma nke Malta. Akwụkwọ ikike ụgbọ mmiri nke onwe bụ ohere maka ndị njem okomoko ịchọpụta ọgba na usoro okike nke Gozo Island, gafee South nke Malta ruo Marsakala Bay, banye na ọdọ mmiri St. Peter, ma ọ bụ ọbụlagodi nyochaa Blue Grotto tupu ọdịda anyanwụ. Nchịkọta gụnyere njem nlegharị anya nke onwe, ebe ndị ọbịa nwere ike ịga na isi obodo Valletta, Katidral St. John, Barrakka Gardens na Vittoriosa City - ebe bụbu ndị Knights nke Malta.
N'oge mgbe ndị njem okomoko na-achọ ahụmịhe ndị ọzọ na gburugburu ebe nchekwa, Malta na-adọrọ mmasị nke ukwuu n'ihi na ọ pere mpe karịa mba Europe, na-asụ Bekee, na nke kachasị, ọ ka nọ n'etiti mba ndị kasị dịrị nchebe ịga leta. COVID dịruru ná njọ. Obodo a nọ na-eche nloghachi nke ndị njem mba ofesi ma na-akwado nkwado ka mma iji hụ na nkwụsị ọ bụla dị ụtọ, na-akwụghachi ụgwọ, ma dịkwa mma. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ogbugba ndu Malta nke COVID-19, pịa Ebe a.
Maka ozi ọzọ, gaa na https://www.visitmalta.com/en/home, @visitmalta na Twitter, @VisitMalta na Facebook, na @visitmalta na Instagram.